Otu esi ehichapụ nkwado ndabere nke oge | Esi m mac
Ụlọ Ignatius | | Mac OS X, Ngwa ndị ọzọ maka Mac
Ndabere na ụwa nke kọmputa bụ ihe jikọtara na obi iru ala. Sistemụ arụmọrụ ọ bụla na-enye anyị sistemụ iji mepụta nkwado ka ọ bụrụ na anyị nwere nnukwu mmehie na draịvụ ike anyị, Ozi niile anyị chekwara na ya agaghị efunahụ anyị. Mana nke a abụghị ọrụ ya naanị. Ọ dị mkpa mgbe niile ịme ndabere mgbe anyị chọrọ ịwụnye ụdị kachasị nke sistemụ arụmọrụ nke ụlọ ọrụ na-ebupụta kwa afọ ọ bụrụ na ihe agahie na usoro ahụ ma anyị ga-amalite ịwụnye site na ịchacha usoro ma tufuo ọdịnaya niile anyị arụnyere ma ọ bụ chekwaa na Mac anyị.
Ma kwa, Time Machine dị mma maka ịgbake faịlụ nke anyị ehichapụla na mberede na enweghị ike ịchọta ya na ndekọ ọ bụla na draịvụ ike anyị. Nnukwu uru nke Time Machine na-enye anyị ma e jiri ya tụnyere ngwa ndị ọzọ maka ịme akwụkwọ ndabere bụ nke ahụ anyị nwere ike ịnweta mbipụta ndị a ga - asị na ọ bụ diski diski nke mere na anyị nwere ike iji aka ha nyochaa ma weghachite faịlụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ihe anyị na-enweghị ike iji sọftụwia ọ bụla mee iji mepụta akwụkwọ nkwado ndabere.
Apple na - eme ka ngwa igwe maka ndị ọrụ niile nweta sọftụwia na - enye anyị ohere ịmepụtaghachi ọdịnaya niile anyị chekwara na Mac anyị. iputa na 10.5 nke OS X na 2007, e mere ya baptizim Leopard. Oge Igwe na-emepụta nkwado ndabere nke faịlụ ndị enwere ike weghachite mgbe ọ dị mkpa. Isi uru ọ na-enye anyị bụ na anyị nwere ike weghachite faịlụ, otu faịlụ ma ọ bụ usoro niile.
Apple na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ ma a bịa n'ịmepụta akwụkwọ ndabere site na Time Machine:
Mpụga mpụga jikọọ na ọdụ ụgbọ USB na ọdụ ụgbọ elu AirPort Extreme Base, nke mere na anyị ga-enwe ọdụ ụgbọ mmiri niile nke Mac anyị n'efu maka ihe anyị chọrọ.
Mpụga mpụga jikọọ na USB, FireWire, ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Thunderbolt nke Mac. Ihe ngwọta a bụ ihe kachasị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala ebe ọ bụ naanị ego anyị ga-etinye bụ nke diski ike.
A Capsule Oge ma ọ bụ OS X Server na netwọk. Dị ka aha Time Capsule na-egosi, ọ dị ka oge capsule ebe Time Machine na-eme nkwado ntụkwasị nke Mac anyị.Ukpụrụ kachasị na sistemụ a na-enye anyị bụ na anyị nwere ike ịnweta ya ebe ọ bụla n'ime ụlọ ebe ọ bụ na njikọ ya sitere na Wi- Fi. Iji mee nkwado mbụ na Time Capsule, ọ kachasị mma ịme ya site na eriri netwọkụ, nke mere na usoro ahụ dị ọsọ karịa Wi-Fi.
Ugbu a ọnụahịa nke SSD draịva adaala nke ukwuu ma anyị nwere ike ịchọta ha na ọnụ ala dị ọnụ ala. SSD siri ike draịva na-enye anyị ọsọ ọsọ na agụ ọgụgụ ọsọ karịa omenala ike draịva, N'ihi ya, ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ iji kwalite ha Mac ike mbanye maka otu nke a ụdị. Mgbanwe a na-enye anyị Mac ndụ ọhụụ site na mbenata oke mbido nke OS X yana ogbugbu nke ngwa ndị anyị tinyegoro.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị ga-azụta draịvụ mpụta iji mepụta akwụkwọ ndabere, anyị kwesịrị ịtụle nhọrọ nke ịbụ SSD, Ebe ọ bụ na ma e kere eke oge nke nkwado ndabere akwụkwọ ga-abụ obere na mgbakwunye ikwe ka anyị nweta dị iche iche na nkwado ndabere na mpaghara na anyị na-eme na a ukwuu ngwa ngwa ụzọ.
A na-ahazi OS X ka oge ọ bụla anyị jikọọ draịvụ ike na USB nke Mac jụọ anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya mepụta nnomi ndabere site na Time Machine. Ọ bụrụ na anyị doro anya n'oge ahụ na anyị chọrọ iji draịvụ ike a iji chekwaa akwụkwọ nkwado ndabere, anyị ga-ahọrọ Jiri diski a, ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na anyị ejikọla draịvụ ike nke anyị chọrọ wepụ data, anyị ga-pịa Ejikwala .
1 Etu igwe igwe si aru oru
2 Why Time Machine Copiies Were Ogologo Oge Ime
3 Otu esi ehichapụ oge nkwado ndabere na mpaghara
4 Otu esi ehichapụ faịlụ ma ọ bụ faịlụ site na nkwado ndabere oge
5 Mee ngwa ngwa na Time Machine
Etu igwe igwe si aru oru
Dị ka m kwuru n'elu, Time Machine bụ nkwado ndabere na mpaghara usoro nke OS X, nke na-enye gị na o mgbe niile na-mgbanwe ọ bụla anyị na-eme na anyị Mac mma. Time Machine na-eme nkwado ndabere kwa awa nke awa 24 gara aga, nkwado nke ụbọchị ọ bụla nke ọnwa gara aga, yana nkwado kwa izu nke ọnwa ikpeazụ. Dika draịva anyi jiri mee nkwado ndabere juputara, a na-ehichapụ ihe ndi ochie kacha ochie.
Why Time Machine Copiies Were Ogologo Oge Ime
Ọ bụrụ na anyị emetụbeghị akwụkwọ ndabere na Time Machine, ọ ga-abụ na nke mbụ na-ewe ọtụtụ awa iji mee ya, ọ dabere na olu faịlụ anyị nwere na ụdị ha bụ. Ichekwa faịlị Okwu 20.000 abụghị otu ihe nye nkwado puku abuo na abuo na MP20.000 format. Isi uru nke Time Machine na-enye anyị bụ nke ahụ nkwado ndabere ọ bụla ị na-eme gụnyere gụnyere naanị faịlụ ndị edegharịrị ma ọ bụ tinye kemgbe nkwado ndabere ikpeazụN'ihi ya, mgbe anyị mere nkwado ndabere mbụ, ndị na-esochi ya na-ewe obere oge ọ gwụla ma anyị agbakwunyela ọtụtụ vidiyo vidiyo, nke ga-ebelata oge arụmọrụ nke ndabere.
Otu esi ehichapụ oge nkwado ndabere na mpaghara
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla kpatara anyị kwesịrị ihichapụ ọ bụla nke nkwado ndabere kachasị ochie, ebe ọ bụ na a na-eji draịvụ ike ahụ iji rụọ ọrụ ndị ọzọ, anyị nwere ike iji aka anyị rụọ ọrụ a n’achọghị ka draịvụ ike jupụta ma ghara inwe ike iji ya maka mkpa anyị ndị ọzọ.
Nke mbụ, anyị na-aga na akara ngosi Time Machine, nke dị na nchịkọta nhọrọ n'elu ma na-anọchi anya ya site na analog analog na akụ nke na-agbanwegharị na ntanetị. N'ime menu adaala gosipụtara na anyị ga-ahọrọ Tinye Oge Igwe.
Mgbe ah niile nkwado ndabere na mpaghara ga-egosipụta otu mgbe ọzọ na ebe onye nke mbu bu nke ikpeazu emere. Naanị n'aka nri nke nkwado ndabere na mpaghara na-egosi ụbọchị emere nkwado ndabere. Iji chọta nnomi anyị chọrọ ihichapụ ngwa ngwa, anyị nwere ike ịga n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ma pịgharịa gaa na ụbọchị egosiri.
Ozugbo egosiri windo nke nkwado ndabere nke anyị chọrọ ihichapụ, anyị ga-pịa wiilị gia wee họrọ Hichapụ ndabere. OS X ga-egosi anyị ihe mmado nke na-akwado na anyị chọrọ ihichapụ nkwado ndabere maka ụbọchị ahụ. Iji gosi ya, naanị anyị ga-pịa Nabata.
N'ikpeazụ, maka usoro ahụ ihichapụ ndabere ahụ, nke ga-ewe nkeji ole na ole, OS X ga-arịọ paswọọdụ nke onye ọrụ anyị, iji nyochaa na anyị bụ ndị ziri ezi ọrụ nke ndị a backups.
Otu esi ehichapụ faịlụ ma ọ bụ faịlụ site na nkwado ndabere oge
Usoro iji wepu faịlụ ọ bụla site na nkwado ndabere Ọ fọrọ nke nta ka m kọwaa ya na ngalaba gara aga nke m gosiri gị etu anyị ga-esi hichapụ nkwado ndabere niile. Nhọrọ a dị mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ihichapụ faịlụ nwere oke nnochite anya na akwụkwọ nkwado yana nke ahụ na-enye anyị ohere inweta ohere ọzọ, dị ka ngwa ma ọ bụ ihe nkiri.
Nke mbụ, anyị ga-aga na akara ngosi nke elekere dị na nchịkọta nhọrọ elu wee họrọ Tinye Oge Igwe.
Ugbu a, anyị ga-esi na windo ahụ gafere na-egosi anyị nkwado ndabere kachasị ọhụrụ na faịlụ anyị chọrọ ka ihichapụ.
Ozugbo anyị chọtara na faịlụ ahụ achọrọ, anyị ga-pịa ya wee pịa wiilị gia nke na ọ na-enye anyị nhọrọ dị iche iche anyị nwere ike iji ya mee. Anyị ga-ahọrọ Hichapụ nkwado ndabere niile nke "faịlụ ahọrọ ma ọ bụ aha nchekwa". N’ụzọ dị otu a Oge Igwe ga-ewepu akara ọ bụla na nkwado ndabere niile na anyị emeela ya na faịlụ ndị ahụ ma ọ bụ folda ndị ahụ.
OS X ga-ajụ anyị maka nkwenye iji hichapụ nhichapụ ma chọọkwa nke ahụ ka anyị tinye paswọọdụ nke onye ọrụ nke ndabere ahụ, ya bụ, okwuntughe anyị.
Mee ngwa ngwa na Time Machine
N'elu ekwuola m na nkwado ndabere mbụ anyị na-eji Time Machine ọ nwere ike were anyị ọtụtụ awa dabere na ọdịnaya nke anyị chekwara na Mac anyị nke anyị chọrọ ịme otu. Mbipụta ndị ọzọ dị ka naanị na-elekwasị anya na faịlụ ọhụrụ oge nhazi dị obere.
Ọ bụrụ na ị na-ejikarị ngwa a eme ka ndabere akwụkwọ ị ga-ahụ nke ahụ anyi amaghi mgbe nkwado ndabere na mpaghara n'ihi na usoro ahụ na-ebute ụzọ maka igbu nke ngwa ahụ na ọrụ izugbe nke usoro ahụ abụghị nkwado ndabere, nke n'oge ahụ bụ nke abụọ.
N'oge ụfọdụ, anyị enweela mkpa i toomi ọtụtụ ozi na Mac na anyị kwesịrị ịmepụtaghachi Time Machine ozugbo o kwere omume. N'okwu ndị a, anyị nwere ike iji iwu nke na-agbanwe usoro mmasị, na-enye Time Machine nnukwu akụ, yabụ a ga-emetụta ọrụ nke Mac anyị. Iji mee nke a, anyị ga-emeghe Terminal, ma dee iwu ndị a:
Ọ bụrụ na ị na-eji ụdị ochie nke OS X, tupu El Capitan na iwu gara aga anaghị arụ ọrụ, gbalịa ịgbakwunye ihe -w ka o wee dị ka nke a:
Maka OS X iji mee mgbanwe a, a ga-akpali anyị maka okwuntughe onye ọrụ ọzọ. Buru n'uche na iwu a na-agbanwe agbanwe, anyị ga-emerịrị ya Malitegharịa ekwentị ahụ na Mac nke mere na nkwado ndabere na-aghọ a ndabere usoro ọzọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa ndị ọzọ maka Mac » Otu esi ehichapụ nkwado ndabere nke TimeMachine
Ndewo iji see foto ma ọ bụ vidiyo site na kọmputa jiri Jing 2, dị na ibe apụl.
Mana enwere m ajuju. Enwere m oge m na-arụ ọrụ na diski naanị 200 gb, ma ugbu a achọrọ m ịgbanwe ya na Capsule, mana amaghị m otu esi akwaga ọdịnaya. Achọpụtala m ịkwado kọmputa m na otu diski dị na mpụga (nke ochie), mana ọ na-agwa m na o nweghị ikike zuru oke. Ma n’ezie ị nweghị ike ị nweta data ahụ. You maara ka esi eme ya?
Daalụ! Enwere m ara na-achọ ozi a! 😀
Zaghachi ka zanoo
Agbalịrị m ihichapụ faịlụ buru ibu site na nkwado TM m ka ọ dị "mkpa" na mpụga HD mana enweghị ike ịme ya.
Mgbe m meghere Backups.backupdb ma chọọ, dịka ọmụmaatụ, igwe Windows XP maka VMWare Fusion, nke nwere ihe dịka 3 Gb na nkwado ọ bụla, ọ naghị enye m ohere ihichapụ ihe ọ bụla. Na menu nke «cogwheel» M ga-esi ot nhọrọ: New nchekwa, oghe, nweta ozi, oyiri ...
Kedu ụdị OS X ị na-eji?
Kedu otu mgbagwoju anya ọ bụ ihichapụ nkwado ndabere TM?
Zaghachi iji hamming
Enwere m ụfọdụ ajụjụ a kapịrị ọnụ banyere TM:
- ndabere ọ bụla (oge awa ọ bụla, nke awa 24 gara aga; ụbọchị ọ bụla n'izu gara aga, ọnwa ọ bụla nke afọ gara aga…) na-echekwa ọdịnaya niile nke diski dị n'ime, ma ọ bụ naanị faịlụ ndị agbanwetara kemgbe nkwado ndabere ikpeazụ?
- Ọ bụrụ na m TM kenyere na Ee (backups n'oge awa ọ bụla), na m na disconnection m mpụga HDD?
- dika m ghotara ya, enwere m ike ihichapụ faịlụ m niile na folda dọkụmentị m (ebe ọ bụ na ejirila TM mee nkwado ndabere tupu ihichapụ ha), ịtọhapụ diski m n'ime (naanị na folda sistemụ yana mmemme), ma weghachite faịlụ ọ bụla m nwere n'ime ha?
- metụtara ajụjụ gara aga, nkwado ndabere dị ka disk disk? ya bụ, enwere m ike imepe akwụkwọ na mac ọzọ na diski TM m, ma ọ bụ na enweghị eweghachite ya na diski m?
- ya na ngwa ndi ozo (karie Retrospect Express) (o biara na HDD nke iomega nke ozo) enwere ike ime akwukwo ndi ozo (backups) na nkeji di iche (huru na otu n'ime ha ada)… enwere ike ime nke a na TM?
daalụ, enwere m olileanya na mmadụ nwere ike ịza m
Ndewo, achọtawo m ihe ngwangwa, dị mfe ma dịkwa irè ma ọ mejupụtara, ozugbo ijikọ diski ike ebe ị mere igwe oge, tinye uru diski, họrọ diski diski, na elu pịa hichapụ, na ala aka nri pịa na ihichapu na voila! =)
ezigbo ozi ekele
Iji oge ewepụta ihe igwe: cmd + shift + 3 na onyogho weghaara nke ihuenyo niile ka echekwara na desktọọpụ.
a ga m eche dijo
Achọrọ m ndabere ụfọdụ faịlụ…. ọbụghị ha niile !!!! kedu ka m ga esi eme ya
Zaa chere chere
Iji hichapụ akwụkwọ nkwado nke TM ma mee ka ọ dị ọcha dị ka ụbọchị mbụ, lee isiokwu apụl na-esote nke na-akọwa ya n'ụzọ zuru oke, ọ nweghịkwa ihe jikọrọ ya na nkọwa nke ọgbakọ na net.
Ndo ma njikọ a bụ nke a:
Pastedị ihe ahụ emeela m ihe ọjọọ ...
Ha akọwaghị ma ọ bụrụ na faịlụ ndị ahụ niile ehichapụ na-aga ahịhịa. Ndi ihichapụ oke olu nke faịlụ site na ahịhịa na-emetụta nkwụsị na akwa nke diski siri ike?
Tim Cook na-egosi nkwado ya maka obodo LGBT mgbe agbapụ Orlando